Sida loo sameeyo dhalasho iyo fiidiyowyo xaflad party Emulator.online ▷ 🥇
Sida loo abuuro dhalashooyinka iyo xafladaha xafladaha
Sameynta fiidiyowyada maalmaha dhalashada iyo xafladaha qoyska had iyo jeer waa xiiso badan waxayna u keentaa ka qaybgalayaasha xitaa isku soo dhowaansho, maadaama ay had iyo jeer suurtagal tahay in dib loogu noolaado xusuustaas adoo bilaabaya fiidiyowga, laga yaabee dhowr sano dhacdada ka dib ama waqti cayiman ka dib. Nasiib darrose, maahan in isticmaaleyaasha oo dhami ay yaqaanaan sida loo dhaqaaqo iyo nooca barnaamijka ama abka loo isticmaalo si loo abuuro dhalashooyinka iyo fiidiyowyada xafladaha - qalabka tafatirka fiidiyowga ee caadiga ah ayaa noqon kara mid aad u adag in la isticmaalo, iyo sidoo kale qaali.
Si loo daboolo baahiyaha qof kasta oo tilmaamahan ah, waan diyaarinnay codsiyada ugufiican, barnaamijyada ugufiican iyo boggaga internetka ee ugufiican si loo abuuro fiidiyowyo dhalasho iyo xaflad, iyadoo la siinayo oo keliya qalab bilaash ah oo u fudud isticmaalayaasha layliska inay adeegsadaan, oo waliba xiise u leh.
AKHRISO: Sida loo martigaliyo xaflad fiidiyoow ah
Samee fiidiyowyo dhalasho ama xaflad
Cutubyada soo socda waxaan ka heli doonnaa qalab taxane ah oo lagu abuurayo dhalashadaada ama fiidyowga xafladaha fiidiyowyada lagu duubay casriga ama kamaradda fiidiyowga dijitaalka ah (kuwa leh). Maaddaama tifaftirka fiidiyowga lagu samayn karo madal kasta, waxaan ku tusi doonnaa barnaamijyada PC-ga, barnaamijyada casriga ah iyo kuwa kiniiniga ah, iyo xitaa bogagga internetka, sidaa darteed waxaad abuuri kartaa fiidiyowga dhalashada adigoo si fudud u furaya biraawsarka.
Barnaamijyada lagu abuurayo fiidiyowyada dhalashada
Barnaamij aan u isticmaali karno Windows si aan u abuurno dhalasho iyo fiidiyowyo xaflad waa Tifatiraha fiidiyowga EaseUS, oo laga soo dejisan karo bilaash bogga rasmiga ah.
Barnaamijkan waxaan ku abuuri karnaa fiidiyowyo hal abuur leh iyadoo la adeegsanayo xulasho wanaagsan oo ah miirayaasha, saamaynta iyo kaaliyeyaasha si loo abuuro fiidiyoowyo mowduuc leh, iyadoo aan la helin khubaro waaweyn. Barnaamijka waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan qaabka tijaabada, laakiin dhammaan howlaha ayaa isla markiiba la heli karaa si loo isticmaalo: runtiina, xadka keliya ee barnaamijkan waa joogitaanka astaan-biyood tilmaamaya barnaamijka iyo xadka dhoofinta ee fiidiyowyada la sameeyay (ugu badnaan 720p), oo si fudud looga gudbo iibsashada rukunka.
Barnaamij kale oo aad u faa'iido badan oo laga sameeyo fiidiyowyada xafladaha iyo dhalashada ayaa ah Wondershare Filmora, oo laga soo dejisan karo bilaashka ah Windows iyo Mac bogga rasmiga ah.
Barnaamijkan waxaan ku abuuri karnaa fiidiyowyo aad u qurux badan dhowr riix oo jiirka ah: xaaladaha badankood waxay ku filnaan doontaa in la jiido faylka fiidiyowga si wax looga beddelo barnaamijka barnaamijka isla markaana loo doorto mid ka mid ah saameynta la heli karo ama kala-guurka, si loo awoodo in la sameeyo kaliya hal fiidiyow oo noociisa ah. Barnaamijka bilaashka ah wuxuu leeyahay dhammaan howlaha lagama maarmaanka u ah abuurista fiidiyowgeena laakiin wajiga dhoofinta wuxuu ku dari doonaa calaamado aqoonsi: haddii aan dooneyno inaan ka saarno, kaliya iibso shatiga isticmaalka ganacsiga.
Si loo ogaado barnaamijyada kale ee waxtar u leh abuurista dhalashada iyo fiidiyowyada xafladda, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad aqriso hageheena Abuur fiidiyow sawir, muusig, raadayn sida muuqaal sawir ah.
Codsi si loo abuuro fiidiyowyo dhalasho
Ma waxaan dooneynaa inaan ka abuurno dhalashada iyo fiidiyowga xafladda tooska taleefanka casriga ah ama kaniiniga, adigoon u gudbin wareejinta nuxurka si aan ugu saxno kombuyuutarka? Xaaladdan oo kale, waxaan kugula talineynaa inaad si dhakhso leh u tijaabiso arjiga. Quik, waxaa laga heli karaa bilaash Android iyo iPhone / iPad.
Furaha sirta ah ee codsigan waa xawaare, xaqiiqdii waxay ku filnaan doontaa in la xusho fiidiyowga si wax looga beddelo loona doorto mid ka mid ah qaabab badan oo tafatir ah oo la heli karo si loo abuuro fiidiyoow tayo leh. Codsigu sidoo kale wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iskuxiriso fiidiyoow gabal kasta oo muusig ah, gooyo qaybaha fiidiyowga, kuna dar jilayaal ama cinwaano Codsiga gabi ahaanba waa bilaash, uma baahnid inaad bixiso wax rukun ah ama shaqooyin dheeri ah.
Codsi kale oo aad u dhammaystiran oo lagu abuurayo dhalashada iyo fiidiyowyada xafladda ayaa ah Magisto, waxaa laga heli karaa bilaash Android iyo iPhone / iPad.
Codsigan waxaad ku abuuri kartaa fiidiyowyo qurux badan oo qosol yar daqiiqado gudahood, kaliya dooro fiidiyowga bilowga ah, dooro mid ka mid ah qaababka wax-u-beddelka u diyaarka ah ee la adeegsan karo (sidoo kale waxaa jira qaab dhalashooyinka iyo ciidaha guud ahaan), ku dar istiikarka iyo saamaynta oo ugu dambayntii dhoofiya fiidiyowga cusub, si aad ugula wadaagi karto shabakadaha bulshada ama codsiyada farriimaha. Codsigu waa bilaash laakiin wuxuu leeyahay waxqabadyo lacag bixin ah, oo si kasta oo ay tahay aan saameyn ku yeelan isticmaalka.
Haddii aan rabno inaan isku dayno codsiyada kale ee fiidiyowga fiidiyowga ah, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad aqriso maqaalkeenna. The barnaamijyadooda gaare slideshow ugu fiican ee Android iyo iPhone.
Bogagga internetka si loo abuuro fiidiyowyo dhalasho
Miyaynaan rabin inaan adeegsanno barnaamijyo iyo codsiyo si aan u abuurno dhalashada ama fiidiyaha xafladda? Xaaladdan oo kale, kaliya furo web browser kasta (oo ay ku jiraan Google Chrome) oo furo Kapwing, oo ah tifaftiraha fiidiyowga ee khadka tooska ah laga heli karo.
Boggu wuxuu ka shaqeeyaa diiwaangelin la'aan wuxuuna bixiyaa dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah abuurista fiidiyowga la doonayo. Si aad u isticmaasho, riix batoonka Guji si aad u xirato inaad u soo geliso fiidiyowga wax-ka-beddelka oo aad u isticmaasho aaladda xagga sare ee daaqadda si aad ugu darto qoraalka, ugu darto sawirro ama raad maqal ah; Dhamaadka shaqada waxaan riixnaa batoonka weyn ee dhoofinta ee qeybta kore ee midig si aan u soo dejino fiidiyowga cusub, si loola wadaago ama loogu keydiyo xusuusta qalabka.
Goob kale oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay abuurista dhalashada iyo fiidiyowyada xafladaha internetka waa Clipchamp, oo marka la barbardhigo boggii hore waxay bixisaa fursado badan oo badan oo ka baxsan sanduuqa.
Mar alla markii aad bilaash iska qorto goobta (waxaan sidoo kale adeegsan karnaa akoon Google ama Facebook ah si aan isla markaaba u helno dhammaan astaamaha), waxaan u gelineynaa fiidiyowga si aan wax uga beddelno oo aan u dooranno mid ka mid ah tusaalooyinka fiidiyowga ee la heli karo, si aan waqti badan u ilaalino. Dhamaadka kaliya riix Dhoofinta dhinaca midigta sare si aad u soo dejiso ama u wadaagto fiidiyaha.
Haddii aan dooneyno inaan adeegsanno bogagga kale ee fiidiyowga fiidiyowga ee internetka waxaan sii wadi karnaa akhrinta tusaheena Goobaha fiidiyowga tooska ah iyo fiidiyowyada fiidiyowga leh remixes iyo saameyn gaar ah.
Si loo sameeyo fiidiyow dhalasho ama xaflad qoys, qasab maahan inaan noqonno agaasimayaal: iyadoo la adeegsanayo aaladaha kor lagu soo sheegay waan awoodnaa ka faa'iideyso arrimo ama qaabab diyaarsan, sidaa darteed waad soo dejin kartaa fiidiyowga oo aad si heer sare ah ugu dhajin kartaa dhowr guji ama qasabado. Haddii aan nahay kuwa jecel tafatirka fiidiyowga, dhammaan boggaga, barnaamijyada iyo barnaamijyada la soo bandhigay ayaa noo oggolaanaya inaan wax ku qabanno gacanta, si aan u soo saarno hal-abuurkeenna.
Si loo abuuro fiidiyowyo qosol badan oo qurux badan oo lagu wadaago shabakadaha bulshada, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad sidoo kale akhriso hagayaasheena Codsi si looga abuuro sheekooyin sawirro iyo fiidiyowyo muusig (Android - iPhone) mi Abuur Looping Boomerang Fiidiyowyo oo Wax ka beddel (Android App).
Sida looga daawado Disney + TV-ga
7-da barnaamij ee ugufiican ee badala midabka timaha waqtiga dhabta ah
Beddelaan Video in MP4 in DVD iyo DVD in MP4
Noocyada 3D ee Google ee leh saameynta AR (meelaha, meerayaasha iyo jirka aadanaha)
Sida loo adeegsado App IO lacagaha, soo celinta iyo isgaarsiinta
Ciyaaraha ugu fiican ee lagu ciyaaro Zoom oo lala yeesho qoyska iyo asxaabta
Ku xakamee TV-ga dabka codka (oo leh Echo, Alexa oo aan fogayn)
Sida TV looga dhigo goob dabka lagu shito (video iyo app)
Abuur Su'aalo Cusub oo leh Jawaabo loogu talagalay Alexa on Amazon Echo
Abka ugufiican ee lagu hagaajiyo qalabka xadhkaha
Sida cod loogu rakibo Google Play Store iyo Apple Store
Tilmaamaha IGTV iyo kala duwanaanshaha Instagram